के तपाईलाई थाहा छ एक मुखे रद्राक्षको दर्शनले नसोचेको ठाउबाट धन “लाभ” हुन्छ ? “ॐ“ लेखेर शेयर गर्नुहोस ३ दिनभित्र आकस्मिक धनको योग हुनेछ ! – Khabar PatrikaNp
के तपाईलाई थाहा छ एक मुखे रद्राक्षको दर्शनले नसोचेको ठाउबाट धन “लाभ” हुन्छ ? “ॐ“ लेखेर शेयर गर्नुहोस ३ दिनभित्र आकस्मिक धनको योग हुनेछ !
August 1, 2020 277
Prevआजदेखि मापसे चेकिङ सुरु ,ट्राफिक नियम मिच्‍नेलाई जरिवाना !
Nextएक जनाको श्रीमती मात्रै ३९, एकै घरमा बस्छन् १ सय ८१ जनाको परिवार !
भर्खरै आयो यस्तो खबर,दशैंभर रातिको समयमा लकडाउन
बामदेव गौतमको आजको सुनुवाई सकियो, यस्तो भयो निर्णय !